Ny governemanta Thai dia mivarotra fizarana amin'ny Thai Airways
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny governemanta Thai dia mivarotra fizarana amin'ny Thai Airways
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Namaky 6 aho
Mpanoratra Andrew J. Wood - eTN Thailand
Thai Iraisam-pirenena (THAI) tamin'ny 19 Mey dia nanamafy fa hametraka eo ambanin'ny toko 3/1 amin'ny lalàna momba ny fatiantoka ho fiarovana raha toa ka mandalo ny drafitra fanavaozana arahan'ny fitsarana.
Hamoy ny anjarany mifehy ny Thai Airways ny governemanta Thailandey satria nankatoaviny ny famerenana amin'ny laoniny ara-bola ny zotram-pitaterana vola amin'ny alàlan'ny fiarovana ny fatiantoka.
Ny zotram-piaramanidina dia nahitana fatiantoka ara-bola miverimberina isan-taona ary ny fahasalamany ara-bola dia vao mainka nampidi-doza taorian'ny naneran-tany Covid-19 areti-mifindra.
“Nanapa-kevitra ny hanao peti-bola izahay amin'ny famerenana amin'ny laoniny ary tsy hamela ny banky Thai Airways ho bankirompitra. Hitohy hiasa ny zotram-piaramanidina ", hoy ny praiminisitra Prayuth Chan-ocha tamin'ny mpanao gazety.
"Nanaiky ny kabinetra fa hampihena ny fananany ao amin'ny Thai Airways ho 50 isan-jato ny governemanta, ary hampiato ny satan'ny kaompaniam-pitantanana amin'ny maha-fanjakana azy", hoy ny minisitry ny fitaterana Saksayam Chidchob. Na dia mino aza ny ao anatiny fa ny sampana hafa amin'ny governemanta dia hitana sakana kely amin'ny fizarana vola izay mbola handray ny governemanta mihoatra ny 50 isan-jato. Ny sendika dia nanohana ny vaovao momba ny fandaminana indray saingy manahy ny amin'ny fihenan'ny fananan'ny fanjakana, satria matahotra izy ireo fa hisy fihenam-bidy bebe kokoa noho ny tombotsoan'ny fanjakana mpikambana ao aminy.
Taorinan'ny fatiantoka goavana tamin'ny taona 2019 ary ny fihenan'ny 90 isan-jato ny vidiny hatramin'ny 1999, dia mikasa ny hampidina ny tahiry sy ny halaviran'ny tenany ny governemanta ankehitriny. Ny fatiantoka natolotry ny mpitatitra dia nahagaga. Tamin'ny taona 2019 fotsiny dia very ฿ 12 miliara izany.
Miaraka amin'ny vinavinan'ny vinavinan'ny ho avy mahatsiravina dia misy ny maika ny governemanta hanalavitra ny zotram-pitaterana an'habakabaka, izy no mpanohana ara-bola ny zotram-piaramanidina farany. Tsy afaka ny ho faly amin'ny fatiantoka vinavina amin'ity taona ity izy ireo nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny loza a 18 miliara.
Niatrika krizy ara-bola ity kaompaniam-pitaterana ity tamin'ity volana ity ary tsy maintsy nitahiry ny fikorianan'ny vola tamin'ny hafa mba hanatanterahana ny fanoloran-tenany.
Mazava ho azy, ny nahatonga ny zotram-pitaterana hanidina hatry ny ela dia ny fananan'ny ankamaroan'ny Minisitry ny Vola Thailandey 51 isan-jato. Na izany aza, manana trosa ฿ 92 miliara ny ankamaroany amin'ny tsenan'ny fatorana Thai, ny maso ivoho naoty naorina any Bangkok dia nampihena ny fatoran'ny zotram-piaramanidina avy amin'ny A ka hatramin'ny BBB.
Ny tsenan-tahiry koa dia nametraka feo ratsy tamin'ny Alatsinainy. Ny vidin'ny fizarana THAI izay efa rava dia nisondrotra ary avy eo nisondrotra. Ny vidin'ny THAI tamin'ny taon-dasa tamin'ny 20 Jona 2019 dia 10.90 raha oharina amin'ny fikatonan'ny orinasa androany 20 Mey 2020 an'ny 5.40, nilatsaka efa ho antsasaky ny 11 volana.
Ny fanamboarana azy dia horaisina amin'ny alàlan'ny Fitsarana fatiantoka foibe, ahafahan'ny zotram-piaramanidina miasa toy ny mahazatra ary mitazona ny mpiasa mandritra izao fotoana izao.
Ny ampahany amin'ny drafitra fanarenana dia hahita fihenan'ny fiaramanidina rehefa mandeha ny fotoana (fiaramanidina 74 amin'izao fotoana izao) ary ny fiaramanidina nampanofaina naverina, izay mety hitarika ho amin'ny fihenan'ny mpiasa amin'ny ho avy.
Na dia miezaka aza ny mpitatitra ny sainam-pirenena mba hanana drafitra fanarenana ara-bola, dia nahazo vaovao ratsy ihany koa ilay kaompaniam-pitaterana. Thaiger.com dia nitatitra fa ny Airbus dia miantso ny trosany amin'ireo fiaramanidina miisa 30 ampanofanan'ny fiaramanidina. Nilaza ny lefitry ny minisitry ny fitaterana any Thailandy fa voamarina tamin'ny 15 Mey ny trosan'ny orinasa, raha ny antontan-taratasy dia nanaporofo fa manandrana manangona trosa hanofana fiaramanidina 30 ny Airbus satria manakaiky ny daty voatondro.
Ny governemanta dia nanohana ilay mpitatitra mikorontana nandritra ny 5 taona, saingy tsy nahomby tamin'ny famahana ny olany ara-bola, ka io fomba fanao amin'ny fatiantoka io no safidy tsara indrindra, hoy ny lefitry ny minisitra lefitra, izay nilaza fa aorian'ny fivarotan'ny Minisiteran'ny Vola ny anjarany maro an'isa, ny orinasa tsy ho orinasam-panjakana intsony ary ho mora tantana. Ny drafitra fanarenana dia tsy maintsy apetraka amin'ny tribonaly amerikana ihany koa mba hisorohana ny mpampindram-bola amerikana hisambotra ireo fiaramanidina rehetra na hanangona ny fananan'ny kaompaniam-pitaterana.
Thaiger.com dia nitatitra fa fiaramanidina Airbus 53 no indram-bola indramina amin'ny Thai Airways ary ahitana:
▫️6 ✈️ Airbus A380-800s
▫️12 ✈️ A350-900s
▫️15 ✈️ A330-300s
▫️20 ✈️ A320-200s
Amin'izao fotoana izao, ny fananany vitsivitsy dia voaro amin'ny fangatahan'ny mpampindram-bola na dia mieritreritra aza izy ireo raha mila mitady fiarovana amin'ny fatiantoka fa tsy any Etazonia ihany fa amin'ny toeran-kafa any ivelany.
Ny sidina anatiny voafetra dia natomboka indray tany Thailand fa ny serivisy iraisam-pirenena dia mbola miorina hatrany hatramin'ny faran'ny volana Jona noho ny tahotra ny virus corona.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia midika fa manomboka izao, Thai Airways dia misidina irery (tsy tiana hatao), tsy misy ny fanohanan'ny governemanta ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny zava-misy ara-barotra.
Ity krizy ity dia mampanantena fiverenana any amin'ny tontolo tsy dia tia tanindrazana sy manana aingam-panahy manerantany kokoa, vavolom-belona ihany koa isika fa vavolom-belona ny governemanta hametraka olana momba ny filaminam-pirenena.
Tsy mazava mihintsy ny karazana tsena hanidinana an'i Thai Airways, amin'ny fiheverana fa ny orinasa no mahavita mamorona fiovana mahomby sy maharitra.
Ny andro IMEX Buzz dia manampy amin'ny famoronana mpijery fironana
Mitsangatsangana any Thailandy? Miomàna handray COVID-3 19 ...
Rehefa tian'ny namanao akaiky indrindra ianao hahazo ...
Fanonganam-panjakana any Guinea: voasambotra ny filoha, rava ny governemanta ...
Alaska Airlines dia mitondra jet vaovao Boeing 12-737 miisa 9
Nakatona ny tranobe fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka any Ekosy: tsy misy drafitra B
Miasa mafy ny orinasam-pitaterana an'habakabaka eropeana ...
An'arivony maro no tafaporitsaka satria nanafoana saika ny Airlines Air Madagascar ...
Ny valan-javaboary Oganda dia mitsidika mora kokoa ho an'ireo mpizahatany
Vonona hampihatra ny politikan'ny vaksiny vaovao ny Air Canada
Nofoanana daholo ny sidina, nikatona ny seranan-tsambo rehefa niamboho i Shanghai ...
Taliban dia mifehy tanteraka an'i Hamid Kabul ...
Ny Bahamas dia mandray ny dia vaovao Crystal Cruises ...
Mitarika an'i Afrika amin'ny mpandeha sy ny entana ny Etiopiana ...
Ny minisitra Bartlett dia manao tetik'asa fiverenana feno fitsangantsanganana ...
Seranam-piaramanidina Bangkok hanompoana hopitaly ambanivohitra COVID-19
Apple dia mitahiry ny drafitra ifandresen-dahatra hizaha ny azy manokana ...
Te hanana zazakely aho: fitsangatsanganana misy tanjona!
Nofaranan'ny Danemark ny fameperana COVID-19 rehetra aorian'ny 548 andro ...
Namerina ny sidina Maorisy i Emirates, nosy ...
Nanjavona ny Lake Powell: Mampalahelo tokoa ny fizahan-tany!
Fiji dia nanosika mankany amin'ny fisokafan'ny fizahan-tany amin'ny volana Desambra 2021
Southwest Airlines dia manambara ny filoha vaovao
Ireo mpizaha tany dia mahita ny fiafaran'ny fiainam-piainana Phuket amin'ny 9
Tsy misy radara? Tsisy olana! Misokatra ny seranam-piaramanidina Kabul ho an'ny ...
Rosia dia maniry ny fananany Las Vegas any Sochi
Mandrahona ny hanaisotra ny Stonehenge an'ny World Heritage ...
Lufthansa dia manolotra ny vahaolana IT ho an'ny maharitra ...
Fiaramanidina mpiady F18 mijanona eny amin'ny lanitra
Sambo tsy mety simba milentika any akaikin'ny Nosy Canary, olona 52 ...
Tena ilaina ny fiofanana ho an'ny mpiasa aviation ho an'ny post covid
Io ve no fomba famaranana ny areti-mifindra eto an-tany?
Mahagaga tokoa ny fomba nankalazain'i Ghana ny Andro maneran-tany momba ny fizahantany
Takian'i Google ny mpiasa rehetra miverina any amin'ny birao ...
Tetikasa 13 ho an'ny distrika 13 hamonjy ny fizahan-tany Himalaya
Tsidiho ny Maldives miaraka amin'ny fanampiana ny tranokala fanaovana vaksiny
ATB: Tsy miady amin'ny irery intsony ho an'ny Survival momba ny fizahantany afrikanina
2021 ny vola miditra amin'ny fizahan-tany latsaka ny antsasaky ny areti-mifindra mialoha ...
Ny Nosy Canary dia 'azo antoka' hoy ...
Lufthansa dia miantoka famindram-bola bebe kokoa amin'ny renivohitra ...
Boeing 737 MAX nodiovina hanidina amin'ny habakabaka indiana indray
Fanaraha-maso henjana vaovao ho an'ny seranam-piaramanidina Prague ...
Olona 4 maty tany amin'ny fiaramanidina Repoblika Tseky sy France ...
Voaroy! Ny vahiny manafina sy misotro toaka any Thailand
Olona an-jatony voan'ny vaksiny hopitaly any UK miaraka amin'ny ...